Wonder Woman ၊ Deadpool နဲ့ The Rock တို့နဲ့ ရုပ်ရှင်ကားရိုက်မယ့် Netflix
Wonder Woman ၊ Deadpool နဲ့ The Rock တို့ကိုသုံးပြီး Netflix က ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိ
11 Jul 2019 . 2:27 PM
Netflix က ရုပ်ရှင်ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပရိသတ်တွေတော်တော်များများ စိတ်ဝင်စားလာကြတာကို တွေ့နေရပါတယ်။ အခုဆိုရင်လည်း Stranger Things Season3ထွက်ထားပြီး ပရိသတ်ရဲ့အားပေးမှုကို Netflix က တခဲနက်သိမ်းပိုက်ထားပါတယ်။ ပုံမှန်ဆိုရင် ဇာတ်လမ်းတွဲတွေကို ပိုပြီးအသားပေးတဲ့ Netflix က ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ ငွေတွေအလုံးလိုက်အရင်းလိုက်သုံးပြီး နာမည်ကြီးမင်းသားမင်းသမီးတွေနဲ့ ရုပ်ရှင်ကားကြီးတစ်ကားရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်။
“Red Notice” ဇာတ်ကားက Action Thriller အမျိုးအစား Heist ဇာတ်ကားတစ်ကားဖြစ်ပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကဇာတ်လမ်းကတော့ တစ်ကမ္ဘာလုံးက အကြီးအကျယ်အလိုရှိနေတဲ့ Art Thief တစ်ယောက်ကို လိုက်ဖမ်းမယ့်ဇာတ်လမ်းလေးပဲဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် ဇာတ်ကားကိုလည်း နိုင်ငံတော်တော်များများမှာ ရိုက်ကူးဖို့ပြင်ဆင်ထားပါတယ်။ ဒီဇာတ်ကားကိုရိုက်ဖို့အတွက် Netflix က ဒေါ်လာ ၁၃ဝ မီလီယံ လောက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံထားတယ်လို့ သိရတယ်။ ဒါပေမယ့် အတွင်းသိတွေပြောတာအရဆိုရင် ဒေါ်လာ ၂ဝဝ မီလီယံ လောက်ထိ ကုန်သွားနိုင်ပါတယ်။ အခုနောက်ပိုင်း Superhero ရုပ်ရှင်တွေ ၊ Live-Action တွေနဲ့ ရေပန်းစားနေတဲ့ ဟောလိဝုဒ်ရုပ်ရှင်လောကမှာ Heist Action Thriller ဇာတ်ကားမျိုးကိုရိုက်ဖို့ Universal လို Studio မျိုးကတောင် စဉ်းစားနေတဲ့အချိန်မှာ Netflix ကတော့ ပါဝါမင်းသမီး ၊ မင်းသားတွေဖြစ်တဲ့ Gal Gadot (Wonder Woman) ၊ Dwayne Johnson (The Rock) နဲ့ Ryan Reynolds (Deadpool) တို့ကို သုံးပြီးရိုက်မယ့် Red Notice ဇာတ်ကားကို အမိအရဖမ်းဆုပ်ခဲ့ပါတယ်။ Netflix ကလည်း တစ်ကမ္ဘာလုံးမှာ အကြီးဆုံးဖြစ်တဲ့ရုပ်ရှင်ထုတ်လုပ်ရေးတစ်ခု ဖြစ်ချင်နေတာနဲ့အညီ ဒီလိုခြေလှမ်းကြီးတစ်ခုကိုလှမ်းလိုက်တာပါ။
Red Notice က ၂ဝ၂ဝ ခုနှစ် မှာထွက်ရှိလာမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် Gal Gadot ၊ Dwayne Johnson နဲ့ Ryan Reynolds ပရိသတ်တွေကတော့ မျှော်လင့်စောင့်စားကြည့်ရှုနေမယ်ထင်ပါတယ်။ ကိုယ်ကတော့ Heist ဇာတ်ကားအမျိုးအစားကို ကြိုက်တဲ့သူမို့လို့ ဒီဇာတ်ကားကို အများကြီးမျှော်လင့်ထားပါတယ်။
by 2B . 19 hours ago
စကျတငျဘာ ၁၉ မှာ မိတျဆကျဖို့ ကြိနျးသသှေားပွီဖွဈတဲ့ Huawei Mate 30